Maqaalkan waxaa qoray Claire Nicklin asal ahaan waxaa daabacay Isbaheysiga Caalamiga ah ee Cuntada mustaqbalka iyo halkan ku habboon fasax.
Soo Koobid: Qoritaanka maalinta la bilaabay Qiimaynta Marble Buluugga ah: Dhismooyinka iyo Mabaadi'da Magaalada Minneapolis, Claire Nicklin, Wakiilka Gobolka ee Wakiilka 'McKnight Foundation', waxay la wadaageysaa fikradeeda ku saabsan sida ay Blue Marble wax u siisay. Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada oo leh fikradaha muhiimka ah iyo fikradaha inaga caawin kara fahamka kakanaanta iyo jiheynta hagista
Shaqadaydii iyada oo la socota Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada Wadashaqeynta (CCRP) ee Mu'asasada McKnight, waxaan nasiib u yeeshay inaan dhageysto Michael Quinn Patton oo kahadlaya Qiimaynta Maqaalka buluuga ah sanadihii lasoo dhaafay. Qalalaasaha Anthropocene, muhiimadda isbeddelka nidaamyada, iyo baahida loo qabo in la qaato qaab isku dhafan oo ku saabsan tallaabada-qiimeynta ayaa ah mid soo jiidasho leh.
CCRP-da waxay ku bixisaa 85 mashruuc oo cilmi-baaris xagga beeraha ah oo lagu sameynayo Andes iyo Afrika oo lagu xoojinayo goobta-ku-saleysan, ka-qaybqaadasho, cilmi-baaris beero-iyo-beero leh beeraleyda yar-yar. Mashaariicda ayaa loo habeeyay seddex jaaliyadood oo tababbarka ah si kor loogu qaado barashada bulshada. Waxaa sidoo kale jira deeqo-goynta, oo ay ku jiraan mid ka mid ah Isbaheysiga Caalamiga ee loogu talagalay Mustaqbalka Cuntada, kaas oo gacan ka geysta isku xirnaanta maxalliga, gobolka, iyo dadaalka caalamiga ah ee ku biirinaya isbedelka nidaamyada beeraha.
Si kastaba ha noqotee, markaan booqanayo deeq-bixiyeyaashayada Andes, waxaan had iyo goor dareemaa xishood badan aniga oo adeegsanaya eray-bixinnada qaarkood. Tusaale ahaan, Dr. Alejandro Bonifacio, oo ah dhir taranta isla markaana qayb ka ah kooxda Aymara Indigenous group, uma muuqato inay adeegsato ereyo ay ka mid yihiin “isbeddelada nidaamyada caalamka.” Taa bedelkeeda, waxay u badan tahay inuu farta ku fiiqo warshad quinoa duurka ah ee cowska u muuqda in aan loo kala hadhin ee ciidda lamadegaanka ee altiplano Bolivian ah. Si kastaba ha noqotee, Alejandro, sanadihiisii cilmi baarista iyo la shaqeynta beeralleyda, wuxuu gacan ka geystay socodka iyo abuurista aqoonta udhaxeysa duruufaha caalamiga iyo maxalliga ah, taasoo ka qeybqaatey kor u qaadida maciishadda ee kumanaan beeralley reer Bolivia ah kuwaasoo koray noocyada quinoa ee uu soo saaray, sida sidoo kale, ka shaqeynta sidii loo ilaalin lahaa agroecosystem 'quinoa agroecosystem' ee dalka Bolivia iyada oo loo marayo cilmi baarista iyo faafinta dhirta aan dalaga ahayn.
Alejandro wuxuu shaqadiisa bilaabay isagoo u ololeynaya IBTA, xarunta cilmi baarista beeraha ee Bolivia, halkaas oo uu ka caawiyay joogteynta aruurinta qumanka quinoa oo leh in kabadan 2,000 oo marin. Sannadkii 1985-kii, oo uu hoggaaminayey dhalliyaha dhaqaalaha xilligaa Jeffrey Sachs, Bolivia waxay dejisay siyaasad dhaqameed 'daaweyn naxdin leh' si looga hortago sicir-bararka. Qayb ka mid ah faragelinta ayaa ahayd in si buuxda loo jaro maalgelinta gobolka. Alejandro wuxuu iska helay booskiisii ahaa inuu badbaadiyo aruurinta qumanka quinoa ee IBTA maadaama qaar badan oo ka mid ah saldhigyadooda si kadis ah loogu xiray. Ururinta iyo Alejandro waxay aakhirkii u dhaqaaqeen dhanka PROINPA ee dhowaan la aasaasay, oo ah hay'ad samafal oo ay sameysay hay'adda USAID inta lagu gudajiray xilligii neoliberal ee Bolivia si ay ula wareegaan qaar badan oo ka mid ah mas'uuliyadihii cilmi baarista ee ay dowladu horey u haysay.
Markii la gaaro 1997 qulqulaha quinoa wuxuu si rasmi ah u billowday wuxuuna sii soconayaa illaa sannadka 2014, iyadoo qiimaha iyo tirada la soo saaray si dhaqso leh sanad walba. Boqolkiiba sideetan Quinoa laga dhoofiyo Bolivia waxay aadeen Mareykanka waxaana ku xigay Yurub. Suuqii hore wuxuu ahaa quinoa Real, ama boqornimada quinoa, oo leh miraha cad ee waaweyn. Alejandro wuxuu cunay quinoa dhabta ah ee sii koray, laakiin wuxuu sidoo kale cunay quinoa madow dhulka korkiisa ah cabbitaan la yiraahdo pito, iyo bunni bunni ah qashin yar oo loo yaqaan Quispe. Waqti kadib, suuqa dhoofinta ayaa waliba u baahnaan doona noocyada kale ee quinoa.
Beeraha Andean waxay ku saleysan yihiin waxa hadda loo yaqaan mabaadi'da beero-teknolojiyadda, millenia. Ilaha kala duwan ee cuntada ee la keydin karo waqti dheer ayaa lagama maarmaan u ah deegaanka buurta dheer, halkaas oo roobdhagax qabow ama baraf ayaa mararka qaar tirtiri kara wax soo saarka sanadka. Hal tusaale waa chuño Alejandro kuna soo koray samaynta dhulgariirrada agagaarka Lake Poopó. Chuño waxay muhiimad ahaan u qaboojisaa baradhada qalalan ee wadaniga ah, taas oo leh muuqaalka dhagaxa. Habka wuxuu ku lugeynayaa baradhada si uu u soo tuuro biyo saa'id ah, ka dibna u sii daayo qaboojinta habeenno badan. Baradho barafoobay ayaa markaa lagu qooyay biyo si loo maydho. Bulshada Alejandro waxay aadi jireen xeebta harada Lake Poopó sanad walbo dhowr usbuuc si ay u sameyaan chuño, taasoo sii jiri karta sanado, xitaa qarniyo.
Suuragal ma aha in chuño lagu sameeyo isla goobtaas abtirsiinta ah maxaa yeelay Lake Poopó gabi ahaanba way qallajisay 2015, dhibanaha isbedelka cimilada adduunka. Qulquladihiisu waxay sii yaraayeen dhowr sano oo kale, ilaa ay beeralleydu bilaabeen inay ka qodaan cagahooda cagaaran si ay u beero quinoa badan. Qulqulka xad-dhaafka ah ee taraafikada ayaa horseeday nabaad guur baahsan oo carrada jilicsan ee altiplano. Si dhakhso ah beeralleyda ayaa luminaya abuurkoodii ugu horreeyay in dhirta ay ku daboosho ciid, oo ay ahayd in ay dib u aasaan 2 ama 3 jeer xillikiiba. Bulshooyinka, iyo ugu dambeyntii shahaadada dabiiciga ah, waxay bilaabeen inay u baahdaan abuuritaanka dabaysha dabaysha meel kasta oo 40-80 mitir ah. U hoggaansanaanta way adkeyd markii qiimaha uu sarreeyay.
Quinoa boom wuxuu ku xirnaa suuqleyda Bolivia sanadkii 2015, markii qiimaha iyo baahida ay bilaabeen inay hoos udhacaan, laga soo bilaabo USD$7.27 kiiloo kilo illaa $5.48 kilo marka la gaaro 2017. Qaar ayaa dhaleeceeya ku dhawaaqida 2015 ee ah sannadka Quinoa ee Cunnada iyo Ururka Beeraha ee Qaramada Midoobay sida dareenka badan looga siinayo quinoa wadamada kale ee soosaaraya sida Shiinaha iyo India; qaar kale waxay leeyihiin waxay bilaabeen inay dhacaan waxyar horaantii taas, iyadoo lala kaashanayo jaamacadaha waqooyiga oo keenay noocyo quinoa ah beeraleyda Mareykanka iyo Kanada. Sidoo kale qaar kale ayaa sheegaya in kor u qaadida qotada dheer ee koritaanka marwada koowaad ee Peru sanadkii 2014, ay keentay in xaddi badan oo quinoa lagu beero meelaha hooseeya ee xeebta, taasina waxay u baahneyd xaddi badan oo sunta cayayaanka ah. Waa mala awaal in quinoa aan dabiici ahayn ay ku dhacday dariiqii qiimaha quinoa ee Bolivia, taas oo horseeday in tijaabada quinoa dabiiciga ah ee Bolivian laga helo tijaabooyinka hadhaaga iyo hoos u dhaca baahida.
Wax alla wixii sababa, xabbad joojinta 'quinoa boom' waxay yeelatay xoogaa saameyn togan, sida dhiirrigelinno dheeraad ah oo loogu talagalay beeraleyda si ay u aasaan dabaylaha. Nasiib wanaag, Alejandro iyo asxaab kale ayaa muddo sanado ah uruurinayay oo baaraya dhirta aan dalaga ahayn ee ku taal dhul gariirka altiplano, waxayna leeyihiin xanaano ay ka buuxaan geedahaas sano. Alejandro wuxuu u adeegsaday aqoontiisa maxalliga ah inuu garto dhirta iyo wixii uu ku bartay tababarkiisii rasmiga ahaa (aqoonta caalamiga ah) si loo tijaabiyo, loona faafiyo, loona fahmo faa'iidooyinka ay u leeyihiin ciidda.
Tani waa mid ka mid ah tusaalooyin badan oo adduunka ah oo dhab ah oo tuseysa sida arrimaha caalamiga ah sida baahida macaamiisha, aragtiyaha dhaqaalaha, iyo isbedelka cimilada, ay u yeelan karaan saameyn maxalli ah iyo fiiso, sidoo kale go'aanada maxalliga ah ee ku saabsan sida loo beero - laga bilaabo isticmaalka cagafyada illaa go'aansiga isticmaalka dabaysha jebinta - cidda loo siinayo deeq waxbarasho, waxay saameyn kartaa siyaasadaha adduunka, sida qaanuunka shahaadooyinka dabiiciga ah, iyo badeecadaha dadweynaha sida noocyo cusub oo quinoa ah.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan mabaadi'da iyo qaab-dhismeedyada lagu fahmi karo tusaalooyinkan, waxaan seegi karnaa waxbarashada. Waxaan isku dayaa inaanan u isticmaalin luqadda fiqi ahaaneed deeq-bixiyeyaasha - koox kaladuwan oo ay ka mid yihiin beeralleyda, u dhaqdhaqaaqayaasha, siyaasad-sameeyeyaasha, iyo baarayaasha - kuwaas oo dareemi doona inay ku xadgudbeen ereyada. Waxaan u arkaa mid masuuliyadeyda ah, sida qof ka shaqeeya awood qiimeyn gudaha CCRP, inuu yahay inaan gacan ka geysto fududeynta wadahadalada qiimeynta iyo inuu u turjunto inta u dhaxeysa nidaamyada aqoonta si ay ugu oggolaato barashada iyo ficil inuu ku dhex socdo duruufo kala duwan iyo miisaan.
Qiimaynta Buluuga ah ee Maareynta Buluuga ah waxay CCRP siisay fikrado iyo aragtiyo muhiim ah kuwaas oo naga caawin kara fahamka isku dhafka iyo hagitaanka ficil ahaan, taasna waa mid ka fog ereyada iyo weedho gaar ah.